छौंडा सूत्रको प्रयोग- विचार - कान्तिपुर समाचार
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक हिसाब मिलाउन छौंडा सूत्रको प्रयोग गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उनी बराबरका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यस्तो अनुभूति भएको छ कि छैन ? यो तत्काल थाहा पाउन सकिने कुरा होइन । यही अवस्था रहने हो भने दाहालजीले आफ्नो प्रसिद्ध र परिचित ‘उप’ नाम प्रचण्ड पनि छाड्न बेर लगाउँदैनन् । उनले आफ्ना राजनीतिका सबै आधारभूत कुरा त छाडिसके भने नाममा राखेकै के छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले हाल ग्रहण गरिरहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी हैसियत दाहालको जिम्मा सुम्पिने हो भने दाहालले ‘प्रचण्ड’ शब्दलाई घिसारिरहनुको औचित्य नै के भो र ?
शासनमा छौंडा सूत्रको प्रयोग अहिलेमात्रै भएको होइन । ऐतिहासिक कालदेखि नै शासन–प्रशासनमा गुभाजुहरूको प्रभाव थियो । अहिले त्यो प्रभावले आधुनिक स्वरुप लिएको छ । राजनीतिलाई संकेतमा बुझ्नेहरूले यो बुझिसकेका छन्, अहिले भनिएका बेथिति बेथिति होइनन् । अहिलेको कुरा अलग छ । ‘जनयुद्ध’को कमाण्ड सम्हाल्ने ‘प्रचण्ड’ जस्ता नेता जब सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा विश्वास गर्दै दोस्रोपटक समेत पराजय भोग्न तयार हुन्छन्, त्यसबेला राजनीतिको स्वत्व स्खलित हुनपुग्छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि अहिलेको जस्तो बढ्दो राजनीतिक निरपेक्षता कहिल्यै देखिएको थिएन । अहिले देखिएको छ । एकथरी मानिस भन्छन्, ‘राजा फर्किने वातावरण बन्दैछ ।’ अब ७३ वर्षका राजा सम्भावित गृहयुद्धको थाप्लोमा टेकेर के आउलान् ? कसैले विश्वास गर्दैन ।
अर्काथरी मानिस भन्छन्, ‘गणतन्त्रमा यति धेरै राजाको जन्म भएको छ कि अब कुनै राजाको जरुरत नै छैन ।’ यी दुबै आदिम निराशाका वाक्यमाथि कुनै प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्री वा सञ्चारकर्मीले टिप्पणी गर्न चाहँदैन । देश प्रतिदिन धुलोको गर्तमा भासिँदैछ र प्रधानमन्त्री ओली भन्दैछन्, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि काठमाडौं धुलोरहित भएको छ । सडकमा यी जो मास्क लगाएर हिँंडेका छन्, ती सरकारका विरोधी हुन् ।’ प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:३३
मनसुनी वर्षा सुरु भएसँगै मुलुकभर विकासे दौडको होडबाजी चल्ने गर्छ  । आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि झन्डै ११ महिनासम्म सम्बन्धित पदाधिकारी कानमा तेल हालेर बस्ने प्रवृत्ति कहिल्यै रोकिन सकेन  ।
‘जब पर्‍यो राति, अनि बूढी ताती’ भनेझैं जेठ लागेपछि उनीहरूको चटारो सुरु हुन्छ । चाहे निर्माण क्रियाकलाप होस् या अन्य विविध कार्यक्रमको विषय नै किन नहोस्, अधिकांश कामको किनारा असारमा मात्र लाग्ने गर्छ । हतारमा गरिएका कतिपय कामले दुनियाँ हँसाउने गरेको सन्दर्भ पनि हामी भुल्न सक्दैनौं । स–साना गतिविधि र कागजी प्रक्रिया पुर्‍याएर जबर्जस्ती काम सकेको देखाउने गरेको सर्वसाधारणलाई थाहा पनि हुँदैन । कागजमा शतप्रतिशत प्रगति, उपलव्धि भने सधैं न्यून देखिनुलाई कागजी विकास नभनी के भन्ने ?
यही समयमा सडक निर्माण, सुधार, बिजुली, खानेपानी सम्बन्धी कामले बाक्लो बस्ती भएको काठमाडौं उपत्यकाजस्तो ठाउँ सधैं कोलाहालमय हुने गरेको पाइन्छ । समयमा पुग्ने हिसाबले घरबाट हतार–हतारमा निस्केका विद्यार्थी, कर्मचारी, अति जरुरी कामले हिंँडेका, बिरामी बोकेका सवारी साधन, एम्बुलेन्सको गन्तव्य सधैं अनिश्चित बन्ने गर्छ । पानी परेपछिको गाईजात्रा बयान गरिनसक्नुको हुन्छ ः घुँडासम्म आउने ढल मिसिएको फोहोर पानी, हिलो चिप्लो, नदेखिने खाडल र त्यहाँबाट उछिट्टिने पानीले सवारी चालक एवं पैदल यात्रुको बेहाल हुने गर्छ । वर्षात्को पानीमा गरेको पिच, साना–ठूला निर्माण कार्य छोटो समयमै बग्ने, तहस–नहस हुने यथार्थ हरेक वर्षदेखिने गरेकै हो । पानीले विध्वंस मच्चाएर सबैतिर तहस–नहस बनाएपछि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लागि निर्माण कार्यमा फेरि अर्बौं रुपैयाँ खर्च लाग्ने हेक्का सत्ताधारीमा नहुनु, आम जनताको मर्का नबुझी दुःख दिएर मख्ख पर्नु विडम्बना हो ।